Muuri News Network » Sawirro: Xildhibaanada Beesha Direed ee BF oo go’aan xasaasi ah kasoo saaray shirka Garoowe
Sawirro: Xildhibaanada Beesha Direed ee BF oo go’aan xasaasi ah kasoo saaray shirka Garoowe
May 10, 2019 - Comments off
Xildhibaanada Direed ee ku jira labada gole Baarlamaanka JFS ayaa war-murtiyeed ka soo saaray shirka Garowe ee oo ay ka qeyb galayaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowled-gobaledyada.
Annagoo ah Xildhibaannada Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee beesha Dirreed, waxaanu isugu nimi kulan wadatashi ah oo ku qabsoomay caasimada dalka ee Muqdisho 09/05/2019. Waxaanu si qoto dheer u falanqaynay xaalada siyaasaddeed ee dalka iyo arrimaha ugu waaweyn ee hadda taagan sida dib-u-eegista dastuurka, wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, doorashooyinka la filayo in sannadka 2020 dabayaaqadiisa ay ka qabsoomaan dalka iyo xeerka doorashooyinka ee Golaha Wasiiradu ansixiyeen, nidaamka federaalka iyo Kulanka uga socda magaalada Garoowe madaxda sare ee dalka iyo Dawlad Gobaleedyadda.
Beesha Direed kuma laha wax metelaad siyaasadeed ah shirka ka socda Garowe, sidaa darteed maaha mid gebi ahaan ba khuseeya Beesha Direed, wax kasta oo kasoo baxana maaha wax ay aqbalidoonto.
Shir kasta oo looga hadlaayo arrimaha masiiriga ah ee dalka oo aan ku salaysnayn awood-qaybsiga siyaasadeed ee beelaha Soomaaliyeed isla ogolaadeen ka hor inta aanu nidaamka axsaabta badani dalka ka hirgelin, waxay beesha Direed u aragtaa inuu yahay mid caddaalad darro iyo xasillooni la’aan siyaasaddeed dalka u horseedaya.
Beeshu ma aqabali doonto madal kasta oo hareer marsan hay’addaha dastuuriga ah ee dalka.
Waxaan cadeyneynaa in guddiyadii hore loogu soo dhisay kulamadii ka horeeyay shirkan Garowe sida guddiga wadaxaajoodka iyo xubnaha madaxda dowlad goboleedyadu u soo dirsadeen in lagu kordhiyo guddiyada Dib-u-Eegista Dastuurka ay yihiin kuwo beelo ugaar ah laga soo magaacabay , sidaas awgeedna aysan beesha Dir aqoonsaneen.
Sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa Madaxdaweynaha JFS oo ah astaanka midnimada Qaranka in uu ka fogaado nidaamka kasta oo kala fogaynaya wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.